Tafatafa Tamin’ilay Gadra Saodiana Niteraka Adihevitra Momba Ny Fanagadrana Tondro Molotra · Global Voices teny Malagasy
Tafatafa Tamin'ilay Gadra Saodiana Niteraka Adihevitra Momba Ny Fanagadrana Tondro Molotra
Voadika ny 23 Novambra 2013 23:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, فارسی, Italiano, English
Niteraka adihevitra mafana ny fanagadrana tsy amin'ny antony taorian'ny fandaharana resadresaka notontosain'ny fahitalavitra Saodiana malaza MBC 8 ora hariva, izay nifanaovana tamin'i Walid al-Sunani, gadra nifonja nandritra ny valo ambinifolo taona sy tapany noho ny heviny ara-pivavahana djihadista mpandala tafahoatra ny fiarahamonina ny nentim-paharazana.
Tamin'ny volana Jolay no notontosaina ny tafatafa, ary efa nahemotra indroa ny fandefasana azy tamin'ny fahitalavitra. Nandritra ny tafatafa, nanazava ny antony niampangany ny maha-olom-pirenena azy sy ny tokimpanoavana amin'ny fanjakana saodiana azy i al-Sunani, ka namariparitany ny fanjakana maoderina ho laika madiorano sy nanamelohany ireo mpitondra Al Saud ho mpitsikilon'i Etazonia sy fahavalon'ny Islamo. Nanamafy ny fanohanany ny Al Qadea amin'ireo hetsika atao ao Arabia Saodita ihany koa izy sy ny ady amin'ny fibodoan'ny Amerikana an'i Afghanistana sy Iraka.
Nitarika tsikera ho an'ny governemanta Saodiana hatrany ny olana momba ny fanagadrana tondro molotra. Nilaza ny loharanom-baovao tsy miankina avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona fa maherin'ny 30.000 ireo olona nogadraina tsy amin'ny antony (tondro molotra) [ar], izay nosamborina tsy nisy taratasy fisamborana ary tsy navela haka mpisolovava sy hiakatra fitsarana. Maro tamin'izy ireo no nosamborina nandritra ny “ady manohitra fampihorohoroana” faobe taorian'ny 9/11.
Nihevitra ny sasany tamin'ireo mpisera Twitter fa solontena ara-bakitenin'ny “Wahabbisma” tohanan'ny fanjakana i al-Sunani. Manam-pahaizana manokana momba ny fivavahana antsoina hoe Hakem al-Mutiri nisioka hoe [ar]:
سأعرض فتوى من فتاوى أئمة الدعوة في نجد قبل مئة سنة في شأن أهل الخليج ودخولهم تحت حماية بريطانيا والتي تؤكد أن #السناني ملتزم بها تماما
Hametraka ny sasantsasany amin'ireo fatwas [lalàm-pivavahana] navoakan'ireo manam-pahaizana Najid zato taona lasa izay aho izay momba ny fiantsoana ny vahoakan'ny helodrano hiasa eo ambanin'ny tara-pahazavana britanika izay manamafy fa voafetran'izany tanteraka i al-Sunani
Nanaraka izany avy ireo andianà fatwas izay mamely ny fanombohan'ny fanjakazakan'ny britanika ao amin'ny faritry ny helodrano Persika ary nitaona ny olona mba hanohitra izany.
Bilaogera Saodiana Bader al-Rashed nisioka am-piesoesoana hoe:
Raha nilaza mikasika izay nianaranay momba ny [fivavahana] i al-Sunani. Ny mahasamihafa azy dia nanoratsoratra sarisary tamin'ny dabiliony ny ankamaroan'ny mpianatra raha teo ampanazavana lesona momba izany ny mpampianatra.
Saodiana mpanao matoandahatsoratra Ibrahim al-Qahtani nitsikera ny nisafidianana [tamin'ny tafatafa] mpandala ny fiarahamonina mpandala ny nentin-drazana tafahoatra fa tsy mba ireo gadra mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona tahaka ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanana miaro ny zo sivily sy politika Saodiana: Abdullah al-Hamid, Mohammad al-Qahtani ary Suliman al-Rushodi:
Alohan'ny handaozanao ny fonja, mandehana any amin'ny fonja misy an'i al-Hamid, al-Qahtani sy al-Rushodi. Fotoana hampahafantaranao azy ireo amin'ireo Saodiana sy Miozolomana tsirairay izany.
Bilaogera Saodiana Msaaid al-Rushiad naneho hevitra hoe:
#لقاء_وليد_السناني_مع_الثامنة عموما الي خطط للحلقة كان له هدف ..واضح من الردود ان الهدف جاء عكس ماكان متوقع (:
Mibaribary tsara fa dia manana ny tanjony ireo nikarakara ity fandaharana ity, ary mibaribary ihany koa fa mifanohitra amin'izay nandrasana ny [fiantraikany].